18-05-02 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဆွစ် CNC စက်အတွက်တိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်နှင့်ကရှုပ်ထွေးသောယာဉ်စက်, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, ငြီးငွေ့စရာ, တစ်ချိန်တည်းမှာထွင်းထုများနှင့်ထွင်းထုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်တိကျ Hardware နဲ့ရိုးတံအထူး-shaped Non-စံအစိတ်အပိုင်းများအသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုသည်။ BEC ...
လူအတော်များများအသုံးပြုမှုနှင့်အသေးစား CNC လမ်းလျှောက်စက်၏ coding လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော်လည်း, CNC လမ်းလျှောက်စက်၏နိယာမအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့သက်ဆိုင်ရာအသိပညာနားလည်နိုင်ဖို့ရန်သင့်အား enable ရန်အလို့ငှာ, ယနေ့ငါအကျဉ်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ NUMERIC ၏နိယာမတစ်ခုဖြစ်သည် ...
စီးပွားဖြစ်၏အတိတ်နှစ်ဆယ်နှစ်များတွင်အင်တာနက်နည်းပညာတစ်ခုဟာကမ္ဘာ့စက်မှုဒဏ္ဍာရီပြောင်းလဲနေတဲ့၏မကြုံစဖူးမှုနှုန်းနှင့်စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဘဝကိုစာဖြင့်ရေးသားပေးခဲ့သည်။ အင်တာနက်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုယနေ့နှင့်အတူ "အင်တာနက်ကိုပေါင်း" ကြိမ်မြောက်၏သစ်ကိုပုံမှန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်လာသည် ...
နယူးအင်္ဂါရပ်: တပြင်လုံးကိုစက်အနည်းငယ်ပိုလေးဖြစ်ပါတယ်အတွက်ခံပြီးသောသစ် Ankai Ankai ဝဒေနာယူမြင့်သောမာကျောမှု, ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှု 1, မြင့်သောမာကျောမှု, CNC စက်ထုတ်ကုန် go High-end များ၏ထုတ်လုပ်မှုအထူးပြု, နိုင်ငံခြားနည်းပညာ၏ဝေဒနာ NC မိတ်ဆက်စကားယူ မြို့ရိုးကို thicknes ချ. ခန္ဓာကိုယ် ...
အသစ် SC385 SM203 စက်, Ankai အောင်မြင်စွာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖော်ထုတ်ခြင်း၏ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှလွန်!
သြဂုတ်လ 25, 2012 တွင်ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရှန်ဒေါင်းတက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာနနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ SC385 ဖော်ထုတ်ရန်, ငါတို့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်, SM203 CNC ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးအစားတွင်ခုံရှုပ်ထွေးစက် milling, ငါ၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင် R & D ထုတ်ကုန်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုတစ်စုတစ်ပေး မြင့်မားသော eval ...